Motherboard X570 tsara indrindra (Desambra 2020) - Torolàlana momba ny fividianana hevitra miaraka amin'ny hevitra - Lalao
Motherboard X570 tsara indrindra amin'ny 2020 - Torolàlana momba ny fividianana hevitra miaraka amin'ny hevitra
Vonona ny hanangana ny PC-n'ny lalao farany indrindra ianao, ary efa fantatrao izay fanaingoana ilainao, saingy mijanona amin'ny motherboard tianao hizorana ianao, sa tsy izany?
Aza manahy fa manana vahaolana ho anao izahay. Nanomana lahatsoratra feno izahay, izay hanome anao ny fahalalana rehetra momba ny sasany amin'ireo motherboard X570 tsara indrindra eto an-tsena. Ireo motherboard rehetra ireo dia voalaza amin'ny fomba midina. Vakio ity lahatsoratra ity raha te hahalala hoe iza amin'ireo no motherboard tsara indrindra tokony hovidinao.
PS5 vs Xbox Series X - Iza amin'ireo Console Gaming no tsara indrindra?
Lisitry ny Motherboard X570 tsara indrindra ampiasaina amin'ny taona 2020:
Rehefa avy nandinika ny motherboard izahay dia nanao lisitra an-tsoratra ny sasany amin'ireo motherboard X570 tsara indrindra izay tokony hotandremanao. Ka ity ny lisitr'ireo Motherboard X570 tsara indrindra:
Gigabyte X570 AORUS Elite motherboard dia tonga amin'ny tetibola sy ny sehatra X570. Izy io dia miaraka amin'ny fototra rehetra, ao anatin'izany ny PCI-e 4.0 ka hatramin'ny PCIe 4.0 N.2 slots, ny ampinga IO miampy, ny fantsom-panafanana lehibe manarona ny VRM, ary ny fanohanana USB type-C eo aloha, ankoatra ireo fiasa hafa. Ny fanohanana ireo mpikirakira andiany Ryzen 2000 sy Ryzen 3000 Gigabyte X570 AORUS Elite no birao faharoa ao amin'ny vokatra Gigabyte X570.
Ny Elite dia nilaza fa manome ny mpampiasa sehatra iray mifandanja tsara hanorenany, manolotra ny fifandraisana vaovao sy ny faritra feno fandefasana herinaratra afaka mitondra ny fizotran'ny Ryzen 3000 rehetra. Ny fisehoan'ny Gigabyte X570 AORUS Elite dia somary tsy mazava amin'ny PCB mainty rehetra ary ny stenciling manodidina ny fantsom-panafana chipset sy ny faritra audio. Raha mivoaka amin'izany isika dia afaka mahita ny marika AORUS amin'ny heatsink VRM havia miaraka amin'ny lambam-paty manarona ny takelaka I / O ao anatiny.
Ny filentehan'ny hafanana rehetra ao amin'ny seranana dia misy famaranana vita amin'ny alimina, miaraka amina fantsom-panafana chipset manohana mpankafy kely miaraka amin'i AORUS Falcon mipetraka am-pireharehana eo amboniny. Ny elanelana DIMM sy PCIe dia mifanitsy amin'ny solaitrabe ihany koa amin'ny lohan'ny PCIe mitafy vy voalohany, izay antsoin'ny Gigabytes hoe Octa Durable PCI-e Armor. Ny mpampitohy hafa rehetra, ao anatin'izany ny APS 24 pin ATX misy pin valo sy ny seranan'i SATA, dia mainty avokoa. Ny jiro RGB dia miseho eo amin'ny solaitrabe, izay hita eo ambanin'ny rakotra I / O amin'ny heatsink VRM, ary ny tsipika iray eo amin'ny ilany havia ambany dia ampiasaina hanasarahana ireo sombim-peo avy amin'ny solaitrabe sisa.
Faly be izahay fa hahita overclocking ary hahalala hoe inona no vitan'ity motherboard tsy lafo ity. Taorinan'ny fanovana kely, ny RX 570 AORUS Elite dia afaka nanosika an'i Ryzen's 7 3700 X ka hatramin'ny 4.1 GHz tamin'ny 1,32 volts; na inona na inona mihoatra an'io teboka io dia nanome fijanonana teo no ho eo ny fitsapana adin-tsaina AIDA64.
Ny seranana dia misy seranan-tsambo 6 SATA, slot PCI-e 4.0 X 4 M.2 roa, ny iray misy heatsink, ary ny port USB marobe, ao anatin'izany ny USB 3.1 gen port roa sy ny aoriana ary ny tontonana eo aloha. Gigabyte X570 AORUS Elite dia birao X570 miavaka eo amin'ny tsena.
Ny motherboard Asus TUF gaming dia iray amin'ireo takelaka lafo vidy indrindra misy amin'ny sehatra X570 fa mahavita mampiditra port USB Type-C, WiFi ary ny fahazavana RGB LED eo akaikin'ny heatsink chipset. Ny tsipika Asus TUF dia niova avy amin'ny ampinga mavesatra mahery nalaza nahafantarana azy taloha ary niova ho amin'ny tabilao afovoan'ny lalao miaraka amin'ny fiarovana ny faritra tsirairay toy ny slot PCIe sy DIMM; ireo fanovana ireo dia nahatonga an'i Asus AM4 TUF Gaming X570-Plus WIFI ho tabilao faharoa lafo indrindra amin'ny vokatra ASUS X570.
Ny overclocking tamin'ity motherboard ity dia nahitàna 4.2GHz tamin'ny fampiasana 1,3 volts amin'ny atiny. Mandritra izany fotoana izany, ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro dia somary avo kokoa noho izay tratry ny X570 AORUS Elite ihany. Izany dia vokatry ny fiparitahan'ny spectrum sy ny cas PCL mitsingevana; nampiasainay ilay multiplayer 42.25 iray ihany. Tsy hahita RGB eo ambanin'ny lambam-paty plastika I / O aho, fa ny marika TUF kosa dia misolo tena ny lambam-paty izay mampahafantatra ny olona rehetra hoe avy aiza ny solaitrabe.
Seranana sy slot:
Toy ny motherboard X570 hafa, Asus TUF gaming X570 Plus WiFi dia manohana ireo mpikirakira andiany Ryzen 2000 Ryzen 3000; misy seranan-tsambo 8 SATA, slot 4 DIMM afaka manohana hatramin'ny 128 GB DDR4 RAM. Na izany aza, ny fanohanana ny hafainganam-pandeha fahatsiarovan-tena diso tafahoatra dia tsy voalaza.
Ny faritra PCI-e dia misy slot roa feno halavany sy slot 2 X1; ny toerana X1 dia mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha X1. Ity no fanaingoana mahazatra an'ity karazana tabilao ity, ny chipset X 570. Ny Asus AM4 TUF Gaming X570-Plus WIFI dia motherboard iray tena mahay izay manomboka amin'ny vidiny mirary tokoa.
Ny Gigabyte X570 AORUS PRO WiFi dia manohana ny AMD CPU faharoa sy fahatelo an'ny Ryzen CPU, ary ny APU dia mampiasa ny sokajy AM4. Ny Gigabyte X570 AORUS PRO WiFi dia manana dingana 12 + 2. Fizarana enina ambaratonga enina ampiasana ampaham-pahefana miisa 48 dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny 4 ACA azo alaina ao amin'ny CPU. Ny fahefana manome sakafo ho an'ny VRM dia ny mpampitohy EPS valo-pin ilaina miaraka amin'ireo paingotra efatra tsy voatery hisolo tena fahefana ampy ho an'ireo CPU multicore noana ireo.
Ireo lozam-pahatsiarovana efatra ao amin'ny Gigabyte X570 AORUS PRO WiFi dia nanohana hatramin'ny 128GB fitadidiana DDR4 tao anaty fantsona roa ary niresaka tamin'i Octa Durable memory Armor, izay manome tanjaka vitsivitsy hanampiana amin'ny fikolokoloana PCB ary koa manampy amin'ny fisorohana ny fanelingelenana ESD. Miankina amin'ny haben'ny RAM sy ny CPU Ryzen ny hafainganam-pandeha, izay andiany 3000 ihany no manohana ny taha ambony tahaka izany.
Ny X570 AORUS PRO WiFi dia manana 19 alalana USB manomboka amin'ny USB 2.0 ka hatramin'ny USB 3.0 gen 2. Manana seranan-tsambo 8 USB 2.0 isika, efatra ao aoriana ary efatra azo alaina amin'ny motherboard. Ho an'ny fanitarana PCI-e, misy slot PCI-e 4.0 X16 lava halava, izay ny voalohany dia X16 elektrika ary mizara bandwidth miaraka amin'ny slot faharoa ho an'ny fikirakira X8 sy X8. Ireo slot roa ireo dia samy manana ny fiadian'ny Octa Durable PCI-e ho tanjaka fanampiny.
Ary farany, X570 AORUS PRO WiFi dia manana faritra roa izay hazava amin'ny hazavan'ny RGB, kofehy iray amin'ny lamba afovoany I / O ary ny iray hafa manaraka ilay fantsom-peo fisarahana. Azonao atao koa ny manampy ny jiro RGB fanampiny raha tianao izany. Ny vidin'ny X570 AORUS PRO WiFi.
MSI MAG X570 Tomahawk dia takelaka tsara kalitao izay ampiasainy ny ISL69247 mpikirakira signal enina dia nalaina ho an'ny ampahany Vcool ho an'ny VRM ary avy eo avo roa heny tamin'ny fampiasana ny ISL's 6617 dingana roa heny ireo dingana 12 avy eo dia mifandray amin'ny kintana amin'ny fampisehoana ISL99360 am-polony ary dingana elektrika. Amin'ny alàlan'ny default, MSI dia mampiasa haavo 500KHz CPU switching ho an'ny seranana roa ary miorina amin'ny volt 1.2 vol.
Ny sisin'ny lalao VRM dia mamoaka hafanana 46 watt, izay manazava ny antony mahatonga ireo seranana ireo hirehitra mafana noho ny fisarihana 3950X manodidina ny 170-190 amps miaraka amin'ny PBO. Mandritra izany fotoana izany, ny MSI MAG X570 Tomahawk dia hamokatra hafanana 17 watt amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny fihenan'ny 60% amin'ny vokatra hafanana. Ny MSI MAG X570 Tomahawk dia manana endrika endrika heatsink mitovy amin'ny an'ny lalao gaming, saingy tsara izany.
Amin'ny ankapobeny, MSI MAG X570 Tomahawk dia toa tsara, ary tsy misy antony tsy tokony hahatonga an'ity tabilao ity ho motherboard AM4 tsara indrindra amin'ny tetibola. MSI MAG X570 Tomahawk no rindrambaiko manaitra indrindra izay notsapainay hatrizay raha oharina amin'ireo maodely efa misy. Ny Tomahawk dia manaparitaka ny takelaka toy ny X570 gaming pro carbon WiFi. Aleo fotsiny isaky ny masontsivana.
Ity motherboard ity dia manaitra tanteraka. Rakotra tanteraka amin'ny fantsona hafanana mifono vy sy fantsom-panafanana izy io; angamba izao no antony tokana tsy manana mpankafy chipset ity motherboard X570 ity. Ity irery ity dia singa iray mahafinaritra satria mazàna mafy ny mpankafy. Ny Gigabyte X570 AORUS Xtreme dia misy fifandraisana maro ho an'ireo mpankafy na lohateny RGB. Gigabyte dia ahitana lohan-doha mpankafy 8 amin'ny sisintany. Eo amin'ny ankavanana ambony, ny birao dia manolotra bokotra lehibe roa koa hanakanana ny herinaratra sy hamerenana. Manampy izany raha mampiasa an'ity tabilao ity ianao amin'ny fisedrana.
Araka ny tondroin'ny anarany, ity tabilao ity dia afaka mankamin'ny faran'izay farany ary natsangana voalohany indrindra ho an'ny overclocking. Ity motherboard ity no hany motherboard X570 misy Izay mampiasa VRM 16 dingana. Ny ankamaroan'ny tabilao premium hafa dia milaza fa manana famoahana herinaratra 16 amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mpampiasa roa sosona. Ny hery natolotra tamin'ny fihoaran'ny X570 dia iray amin'ireo tsara indrindra hitanay. Gigabyte dia nahavita asa mahafinaritra tokoa. Ny BIOS Gigabyte koa dia niova rehefa nandeha ny fotoana ary lasa tena tia olona. Ny overclocking ny processeur dia tsotra amin'ity motherboard ity. Afaka nanadidy an'ity tabilao 4.3GHz ity izahay raha nampiasa colts 1,4 tamin'ny atiny.
Raha manana paosy lalina ianao ary misy teti-bola tsy azo tohaina amin'ny fananganana anao, dia tena hatolotray ny Gigabyte X570 AORUS Xtreme.
Ity no lahatsoratray feno tao amin'ny Motherboard X570 tsara indrindra izay azonao safidiana. Ny motherboard tsirairay izay notanisainay etsy ambony dia ny sasany amin'ireo tsara indrindra izay eo an-tsena ankehitriny. Azonao atao ny misafidy ny iray amin'ireto ary mampiasa azy io amin'ny fananganana anao, ary ny PC-nao aza tsy hiala amin'ny fanatontosana hatramin'ny farany vitany.
Antenainay fa nahita fampahalalana ity lahatsoratra ity ianao ary tsy ho ela dia hanao ny volanao ianao. Raha eny dia alatsaho izay motherboard ampiasainao amin'ny fananganana anao, ary raha manana fanontaniana momba ny motherboard X570 tsara indrindra ianao dia avelao ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany.
Motherboard Z390 tsara indrindra ho an'ny lalao
Serivisy VPN tsara indrindra - azo antoka sy azo antoka
Rohy vondrona WhatsApp - Mamorona, mizara & mandefa
Ahoana no hidiranao amin'ny GDIT OKTA: Torolalana feno!
ataovy maimaimpoana ny paompy dubstep anao
sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana sarimihetsika feno
kaody mivantana xbox tsy ampiasaina 2016
ahoana no ahazoana kaonty netflix nefa tsy mandoa
inona no tranonkala mivantana mivantana mivantana maimaim-poana?
afaka mijery sarimihetsika maimaim-poana ve aho
alaina maimaim-poana sarimihetsika tsy misy aterineto